အကြံပြုချက်များပေးခြင်း/ အကူအညီပေးခြင်း - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on March 15, 2013 at 10:24 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Making suggestions (အကြံပြုချက်များပေးခြင်း)
အကြံပြုချက်တွေကို ဘယ်အခါမျိုးမှာ ပေးတတ်ကြပါသလဲ? သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘာလုပ်ရရင်ကောင်းမလဲ ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတဲ့အခါမျိုျးမှာ အကြံပြုချက်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူငယ်ချင်းတွေဟာ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်မှာ ဘာလုပ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့ အကြံဥာဏ်မျိုးလဲပေး တတ်ကြပါတယ်။ သင်ဟာတစ်ညနေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပြင်သွားချင်တယ်လို့ စ်ိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအကြံပြုချက်တွေကို ပေးမလဲ?
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ အသုံးပြုတဲ့ အကြံပြုချက်ပေးခြင်း အမျိုးမျိုးထဲက အသုံးများသော အကြံပြုချက် ပေးနည်းတို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Why don't you/we go to the movies to night? (ဒီညရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်လား?)
You/We could visit New York while you're/we're there. (အဲဒီကို ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် နယူးယော့ကို လည်လို့ ရတာပဲ။)
Let's go to the travel agent's this afternoon to book our ticket. (လက်မှတ်ကြိုတင်ဝယ်ဖို့ ဒီနေ့လည်ခရီး သွားလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ် (Travel agent) ဆီသွားရအောင်။)
What about asking your brother for help? (မင်းအကိုကို အကူအညီတောင်းကြည့်ရင်ရော ဘယ်လိုလဲ?)
I suggest you we take all the factors unto consideration before we decide. (မဆုံးဖြတ်ခင် အခြေ ခံအကြောင်းအရင်းအားလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်။)
မေးခွန်းဆိုရင် ကြိယာရဲ့အခြေခံ ပုံစုံကို အသုံးပြုပါ။
Why don't you/we go toamovie? (ရုပ်ရှင် သွားကြည့်ရအောင်လား?)
အဆိုပြုဝါကျဆိုရင်လည်း ကြိယာရဲ့ အခြေခံပုံစံကိုပဲ အသုံးပြုပါ။
We/You could go toamovie. (ရုပ်ရှင်တစ်ကားကားသွားကြည့်လို့လည်း ရတာပဲ)
Let’s နဲ့ အစပျိုးတဲ့ အကြံဉာဏ်ဆိုရင်လည်းပဲ ကြိယာရဲ့ အခြေခံပုံစံကိုပဲ သုံးပါ။
Let’s go toamovie. (ရုပ်ရှင်တစ်ကားကား သွားကြည့်ရအောင်။)
တစ်ခါတလေကျတော့ အမေးဝါကျမှာ ကြိယာရဲ့ ဖြစ်ဆဲကာလပုံစံ (V-ing)ကို အသုံးပြုရပါတယ်။
What about going toamovie? (ရုပ်ရှင်တစ်ကားကားသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော ဘယ်လိုလဲ?)
How about going toamovie? (ရုပ်ရှင်တစ်ကားကား သွားကြည့်ရင်ရော ဘယ်လိုလဲ?)
“Suggest” ဆိုတဲ့ ကြိယာကို အသုံးပြုထားတဲ့ အဆိုပြုဝါကျဆို ရင်တော့ “suggest” ရဲ့နောက်မှာ ကံ(object)နဲ့ ကြိယာရဲ့ အခြေခံပုံစံတို့ကို တွဲသုံးရပါမယ်။
I suggest you / we go toamovie. (ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖိုို့ ငါအကြံပေးချင်တယ်။)
Offering Help (အကူအညီပေးခြင်း)
အင်္ဂလိပ်စကားမှာ ကိုယ်ကသူတစ်ပါးကို အကူအညီပေးတဲ့အခါ လူအများက အသုံးပြုပြီး ပြောလေ့ပြောထရှိတဲ့ စကားအသုံးအနှုန်းအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
May I help you? (အကူအညီပေးရပါမလား?)
Can I help you? (အကူအညီ ပေးရပါမလား?)
မေးခွန်း (Question)တွင် May I နှင့် Can I တို့ကို ကြိယာအခြေခံပုံစံ (Base Form of the verb) ဖြင့် တွဲ၍ အသုံးပြုပါ။
Are you looking for something? (တစ်ခုခုကိုများရှာနေပါသလား?)
"Something" အစား "anything in particular" ဒါမှမဟုတ် "specific object" တို့ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ - Are you looking for anything in particular? (အထူးလိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုများရှာနေတာပါ လား?)
Do you need some help? (အကူအညီများ လိုအပ်ပါသလား?)
"Some help" အစား "some advice" ဒါမှမဟုတ် "a recommendation" အစရှိသည်တို့ကို အသုံးပြုနိုင် ပါသည်။
Do you need some advice? (အကြံဥာဏ်များ လိုအပ်ပါသလား?)
Do you needarecommendation? (ထောက်ခံချက် လိုအပ်ပါသလား?)
"Do you need" အစား "Would you like" ကိုလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
Would you like some help? (အကူအညီလိုချင်ပါသလား?)
ဒီဝါကျမှာလည်း အထက်ကဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ "help" အစား "some advice" ဒါမှမဟုတ် “a recommendation" ကိုသုံး နိုင်ပါတယ်။
What can I do for you today? (ဒီနေ့ခင်ဗျားအတွက် ဘာများလုပ်ပေးရပါမလဲ?)
What can I do for you today? ဆိုတဲ့မေးခွန်းထဲမှာ
"you" အစား "her" "him" "them" အစရှိသည်တို့ကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်သလို
"today" အစား "this morning", "this afternoon" နှင့် "this evening" တို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Making suggestions (အကွံပွုခကျြမြားပေးခွငျး)
အကွံပွုခကျြတှကေို ဘယျအခါမြိုးမှာ ပေးတတျကွပါသလဲ? သူငယျခငျြးတှနေဲ့ ဘာလုပျရရငျကောငျးမလဲ ဆိုပွီး ဆုံးဖွတျခကျြခရြတဲ့အခါမြိုးမြှာ အကွံပွုခကျြပေးတတျကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သူငယျခငျြးတှဟော အခွအေနေ တဈရပျရပျမှာ ဘာလုပျသငျ့တယျ ဆိုတဲ့ အကွံဉာဏျမြိုးလဲပေး တတျကွပါတယျ။ သငျဟာတဈညနမှော သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အပွငျသှားခငျြတယျလို့ ဈိတျကူးကွညျ့ပါ။ သငျ့အနနေဲ့ ဘယျလိုအကွံပွုခကျြတှကေို ပေးမလဲ?
အင်ျဂလိပျစကားမှာ အသုံးပွုတဲ့ အကွံပွုခကျြပေးခွငျး အမြိုးမြိုးထဲက အသုံးမြားသော အကွံပွုခကျြ ပေးနညျးတို့ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Why don't you/we go to the movies to night? (ဒီညရုပျရှငျသှားကွညျ့ရအောငျလား?)
You/We could visit New York while you're/we're there. (အဲဒီကို ရောကျတုနျးရောကျခိုကျ နယူးယော့ကို လညျလို့ ရတာပဲ။)
Let's go to the travel agent's this afternoon to book our ticket. (လကျမှတျကွိုတငျဝယျဖို့ ဒီနလေ့ညျခရီး သှားလုပျငနျးကိုယျစားလှယျ (Travel agent) ဆီသှားရအောငျ။)
What about asking your brother for help? (မငျးအကိုကို အကူအညီတောငျးကွညျ့ရငျရော ဘယျလိုလဲ?)
I suggest you we take all the factors unto consideration before we decide. (မဆုံးဖွတျခငျ အခွေ ခံအကွောငျးအရငျးအားလုံးကို ထညျ့သှငျးစဉျးစားဖို့ ကြှနျတျောအကွံပွုခငျြပါတယျ။)
မေးခှနျးဆိုရငျ ကွိယာရဲ့အခွခေံ ပုံစုံကို အသုံးပွုပါ။
Why don't you/we go toamovie? (ရုပျရှငျ သှားကွညျ့ရအောငျလား?)
အဆိုပွုဝါကဆြိုရငျလညျး ကွိယာရဲ့ အခွခေံပုံစံကိုပဲ အသုံးပွုပါ။
We/You could go toamovie. (ရုပျရှငျတဈကားကားသှားကွညျ့လို့လညျး ရတာပဲ)
Let’s နဲ့ အစပြိုးတဲ့ အကွံဉာဏျဆိုရငျလညျးပဲ ကွိယာရဲ့ အခွခေံပုံစံကိုပဲ သုံးပါ။
Let’s go toamovie. (ရုပျရှငျတဈကားကား သှားကွညျ့ရအောငျ။)
တဈခါတလကေတြော့ အမေးဝါကမြှာ ကွိယာရဲ့ ဖွဈဆဲကာလပုံစံ (V-ing)ကို အသုံးပွုရပါတယျ။
What about going toamovie? (ရုပျရှငျတဈကားကားသှားကွညျ့မယျဆိုရငျရော ဘယျလိုလဲ?)
How about going toamovie? (ရုပျရှငျတဈကားကား သှားကွညျ့ရငျရော ဘယျလိုလဲ?)
“Suggest” ဆိုတဲ့ ကွိယာကို အသုံးပွုထားတဲ့ အဆိုပွုဝါကဆြို ရငျတော့ “suggest” ရဲ့နောကျမှာ ကံ(object)နဲ့ ကွိယာရဲ့ အခွခေံပုံစံတို့ကို တှဲသုံးရပါမယျ။
I suggest you / we go toamovie. (ရုပျရှငျသှားကွညျ့ဖိုို့ ငါအကွံပေးခငျြတယျ။)
Offering Help (အကူအညီပေးခွငျး)
အင်ျဂလိပျစကားမှာ ကိုယျကသူတဈပါးကို အကူအညီပေးတဲ့အခါ လူအမြားက အသုံးပွုပွီး ပွောလပွေ့ောထရှိတဲ့ စကားအသုံးအနှုနျးအခြို့ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
May I help you? (အကူအညီပေးရပါမလား?)
Can I help you? (အကူအညီ ပေးရပါမလား?)
မေးခှနျး (Question)တှငျ May I နှငျ့ Can I တို့ကို ကွိယာအခွခေံပုံစံ (Base Form of the verb) ဖွငျ့ တှဲ၍ အသုံးပွုပါ။
Are you looking for something? (တဈခုခုကိုမြားရှာနပေါသလား?)
"Something" အစား "anything in particular" ဒါမှမဟုတျ "specific object" တို့ကို သုံးနိုငျပါတယျ။
ဥပမာ - Are you looking for anything in particular? (အထူးလိုခငျြတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုခုကိုမြားရှာနတောပါ လား?)
Do you need some help? (အကူအညီမြား လိုအပျပါသလား?)
"Some help" အစား "some advice" ဒါမှမဟုတျ "a recommendation" အစရှိသညျတို့ကို အသုံးပွုနိုငျ ပါသညျ။
Do you need some advice? (အကွံဉာဏျမြား လိုအပျပါသလား?)
Do you needarecommendation? (ထောကျခံခကျြ လိုအပျပါသလား?)
"Do you need" အစား "Would you like" ကိုလညျး သုံးလို့ရပါတယျ။
Would you like some help? (အကူအညီလိုခငျြပါသလား?)
ဒီဝါကမြှာလညျး အထကျကဖျောပွခဲ့သလိုပဲ "help" အစား "some advice" ဒါမှမဟုတျ “a recommendation" ကိုသုံး နိုငျပါတယျ။
What can I do for you today? (ဒီနခေ့ငျဗြားအတှကျ ဘာမြားလုပျပေးရပါမလဲ?)
What can I do for you today? ဆိုတဲ့မေးခှနျးထဲမှာ
"you" အစား "her" "him" "them" အစရှိသညျတို့ကို အစားထိုးအသုံးပွုနိုငျသလို
"today" အစား "this morning", "this afternoon" နှငျ့ "this evening" တို့ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။
Permalink Reply by ohnmarswe on March 15, 2013 at 13:45
Permalink Reply by Ratan Biswas on March 15, 2013 at 14:08
Permalink Reply by myokyawkyaw on March 17, 2013 at 19:32
Permalink Reply by kovida on March 22, 2013 at 17:55
Permalink Reply by aunghtedmyat on March 29, 2013 at 20:02
ွှThank you so much for this lessons .
Permalink Reply by Diamond on July 2, 2013 at 6:24
Permalink Reply by Ponenyat Nyo on September 4, 2015 at 19:37
Permalink Reply by Moe Goke on September 13, 2015 at 0:50